३७ बर्षिय एक महिलाले जन्माइन् एकैपटक १० सन्तान… – Dailny NpNews
३७ बर्षिय एक महिलाले जन्माइन् एकैपटक १० सन्तान…
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ समय: ११:४४:३४
दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले १० शिशुलाई जन्म दिएकी छिन्।दक्षिण अफ्रिकामा अहिले सम्मको अनौठो घटना हो।गोएसामे थामेरा सिथोलाले सोमबार ७ छोरा तीन छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्।उनी ३७ बर्षिय हुन्।
सिथोलाका श्रीमानले आफु १० सन्तानको अभिभावक बनेकोमा खुसी भएको बताएका छन्।उनले श्रीमतीले १० बच्चालाई राम्रो सँग जन्म दिएकोमा खुसी र भावुक भएको बताएका छन।सिथालोले पहिले पनि जुम्ल्याहा सन्तानका आमा बनेकी थिइन।यो सँगै सिथोलाले एकैपटक १० शिशुलाई जन्म दिएर विश्व रेकर्ड कायम गरेकी छिन।
जमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुणा !
काठमाडौँ । शरीरको साथसाथै, कान सफा गर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरू प्राय जसो आफ्नो शरीर सफा गर्दछन् तर कान सफा गर्न बिर्सन्छन्।कान सफा नगर्दा, कुनै पनि व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ। कान सफा नगर्दा ठूलो रोगलाई निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंले कान सफा गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि आन्तरिक फोहोर जम्मा भई एक दिन कान दुख्ने समस्या आइपर्छ।
यसले कान संक्रमणको खतरा पनि छ। अधिक फोहोरका कारण, हामीलाई सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ र कहिलेकाँही असहनीय पीडा महसुस हुन्छ। यदि तपाईले लामो समय सम्म आफ्नो कान सफा गर्नु भएन भने कान दुख्न थाल्छ ।
साथै कम सुनाइदिन्छ पनि त्यसैले आज हामी तपाईलाई आफ्नो कान सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचारहरुको बारेमा बताउँछौं। यी विधिहरू प्रयोग गरेर धेरै पैसा खर्च नगरी तपाईं आफ्ना कानहरू सफा गर्न सक्नुहुनेछ ।
समान मात्रामा हाइड्रोजन प्याराअक्साइड र केही थोपा पानी लिनुहोस् र कानमा राख्नुहोस्। जब यो कानमा राम्रोसँग जान्छ, केहि समय यसलाई छोडे पछि, कानलाई र्फकाउनुहोस् ताकि पानी बाहिर आओस्।
ध्यान राख्नुहोस् कि हाइड्रोजन प्याराअक्साइडको मात्रा ३ प्रतिशत भन्दा बढि हुनु हुँदैन। कानको फोहोर पनि सजिलै यस प्रयोग द्वारा सजिलैसँग हटाइन्छ।